जनताको जनमत हुने पार्टीलाई पैसाको जरुरत पर्दैन | Sindhu Jwala
केदारनाथ आचार्य (वडाअध्यक्ष उम्मेदवार नेकपा)
ईन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक
आगमी मंसिर १४ गते देशैभरी उपनिर्वाचन हुँदैछ । सोही निर्वाचन सिन्धुपाल्चोकको ईन्द्रावती गाउँपालिका अन्र्तगत वडा नम्बर ८ मा समेत उपनिर्वाचन हुँदैछ । उक्त वडामा वडाअध्यक्षको लागि नेकपाको तर्फबाट केदारनाथ आचार्य र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राले तामाङ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । कडा प्रतिश्पर्धाका बीचमा होमिएका दुई उम्मेदवार मध्ये नेकपाका उम्मेदवार केदारनाथ आचार्य संग चुनावका तयारीका सम्बन्धमा सिन्धुज्वाला डटकम अनलाईनले लिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा ईन्द्रावती गाउँपालिका अन्र्तगत वडा नं ८ को वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ कतिको चुनाव लागेको छ त ?
हामीले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेपछि चुनावी सारगर्मी असाध्य नै बढेको छ । यसबीचमा हामीले मतदाता भेटघाट, घरदैलो कार्यक्रम लगाएत अभियानलाई तिव्रता दिएका छौं ।
यहाँ गत स्थानीय चुनावमा पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला र अहिले के फरक छ ?
म अघिल्लो स्थानीय चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेको थिएँ । त्यतिबेला र अहिलेको राजनीति परिस्थिति निकै फरक देखेक छौं । किनकी त्यतिबेला मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र त्रिपक्षीय भिडन्त थियो । तर अहिले चुनावी उम्मेदवार चारदल भएपनि मुख्यत दुई पार्टी मात्र शक्तिमा छन् । दुईवर्ष अघि भएको स्थानीय निर्वाचनलाई हामीले तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने यो निर्वाचन एक हिसावले हाम्रो पार्टीको निमित्त जनमत संग्रह जस्तो पनि देखिएको छ । किनकी दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेको अवस्थामा जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने वाध्यता छ । यो गाउँपालिका र वडा समेत नेपाली कांग्रेसले जितेको कारण आफ्नो स्थान नगुमाउन नेपाली कांग्रेसले पनि रस्साकस्सी गरेर लागेको अवस्था छ । मतको हिसाब गर्दा मैले गत चुनावमा ३५५ मत प्राप्त गरेको थिएँ । त्यसैगरी त्यस्तै तत्कालिन एमालेका उम्मेदवारले २२१ मत प्राप्त गरेका थिए । यो दुईवटा मतलाई जोड्दा हामी करिब नेपाली कांग्रेस भन्दा २२० मत ले अगाडी रहेको देखिन्छ । त्यसकारण हामीले आफ्नो मतलाई सुरक्षित गरेर आफ्नो पक्षमा मत खसाल्नको निम्ति प्रयात्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो निर्वाचन करिब–करिब संघीय र प्रादेशिक हिसाबले अगाढी बढेको देखिन्छ । यो निर्वाचनमा आम मतदाताहरु पनि असाध्य उत्साहजनक तरिकाले मतदान गर्न आतुर भएको हामीले पाएका छौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ यसपाली कस्तो एजेण्डा लिएर जनतामा जाँदै हुनुहुन्छ ?
असाध्यै सान्र्दभिक प्रश्न उठाउनु भयो । हाम्रो यो ईन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर ८ सबै हिसाले असाध्यै केन्द्रविन्दुमा रहेको छ । यसका वरीपरी अरु वडाहरु रहेका छन् । यो वडा ईन्द्रावती गाउँपालिकाको केन्द्रविन्दु रहेको छ र भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने यहाँ पनि अनेक प्रकारका डाँडाँकाँडा रहेका छन् । यो वडा नम्बर ८ मा विकास निर्माणको कुरालाई हेर्ने हो भने सडक विस्तारका कुराहरु, सडक सुविधाका कुराहरु सबै प्रत्येक बस्तीका पुगेका छन् तैपनि यि सडकहरु बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन नहुने अवस्थामा छन् । वर्षातका समयमा यातायातका साधनरु जाँहा जान सक्दैनन् । त्यस्ता सडकहरुको स्तर उन्नती गर्ने र केही छिटफुट भएका सडकहरुको विस्तार गर्ने र सडको स्तरउन्नती गरेर बाह्रै महिना चल्ने खालको सडक निर्माण गर्ने मैले प्रतिज्ञा लिएको छु । त्यसैगरी हाम्रा बस्तीहरुमा विद्युत सेवा सुचारु गर्न अझै पनि काठको पोलमा विद्युत टाँगिएको अवस्था छ । त्यसलाई काठको पोलमुक्त बनाउन आवश्य छ । त्यस्तै यहाँका जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि यस क्षेत्रमा कम्तिमा ५० शैयाको अस्पताल बनाउने सोचेको छु । त्यसको लागि जग्गा उपलब्ध गराएपछि डिपिआर गरेर संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेट माग गरेर पुरा गर्ने सोचेको छु । त्यसैगरी यस वडाका प्रत्येक बस्तीमा एकघर एकधाराको अवधारणा ल्याएको छु जसले यस वडाका प्रत्येक जनतालाई खानेपानीको पँहुच पु¥याउने हाम्रो सपना साकार हुनेछ । त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि यस ठाउँमा ३ वटा विद्यालयहरु छन् त्यसमध्य पञ्चकन्या विद्यालयलाई १२ कक्षसम्म सञ्चालन गर्ने मेरो योजना छ । त्यस्तै यस वडामा बाहुन, क्षेत्री, नेवार, तामाङ लगाएत विभिन्न जातजातिहरुको बसोबास रहेको हुनाले सबै जातजातिहरुलाई समेट्दै मठमन्दिर, चर्च गुम्बा निमार्ण गर्ने योजना छ । त्यस्तै यो वडामा रहेका युवाहरुलाई समेट्न युवा लक्षित कार्यक्रमको साथै तीनवटा खेलकुद मैदान गहते, अर्चले र ज्यामिरेमा निर्माण गर्ने लक्ष रहेको छ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारबाट यस क्षेत्रमा ३० लाख बजेट परेर खेलमैदान सम्याउने काम समेत काम भईरहेको छ । त्यसलाई ईन्द्रावती गाउँपालिकाको मिनि रंगशाला बनाउने योजना बनाएका छौं । जस्ले युवाहरुलाई एकता र युवा सशक्तिकरण गर्ने काममा जोड गरिने छ । त्यस्तै यहाँ रहेका प्रत्येक बस्तीहरुमा सामजिक कार्य गर्नको लागि सामुदायिक भवन व्यवस्था गर्ने, तथा महिला दलित, जनजाती लगाएतको उत्थान र सशक्तिकरण मार्फत समाजलाई एकतावद्व बनाउने मेरो लक्ष छ ।
यहाँ पहिला पनि पूर्व माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहन्थ्यो थोरै मतले मात्र यहाँ पराजित हुनुभयो । अवत दुई पार्टी मिलेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा आफुलाई कतिको सुनिश्चिता ठान्नु हुन्छ ?
अहिलेको मोटामोटी आंकलन गर्दा हामीले हाम्रो जितको सुनिश्चितता ठानेका छौं । अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा मैले ९ मतले मात्र हारेको हुँ । तर पनि हारलाई स्विकार्दै जनताको काममा पटक्कै छोडेको छैन् । जसका कारण जनताको प्रत्येक सामजिक काममा म संलग्न भएकै कारण जनतामा एकप्रकारको छाप, आड, भरोसा र विश्वास रहेको छ । जनतामा पु¥याएको योगदानको कारण मैले आफुलाई जितको सुनिश्चिता ठानेको छु ।
गत चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसले जितेको अवस्था र वडा समेत उसैले जितेको अवस्थामा कांग्रेसले पनि जितको लागि आफ्नो दावी गरेको छ नी ?
यहाँले भने जस्तै कांग्रेसलाई एकप्रकारको चुनौति नै छ किनकी झिनो मतले वडा र पालिका जितेको कांग्रेसलाई आफ्नो क्षेत्र गुमाउनुको पिडा चानचुने हुँदैन यस अर्थले पनि उसले दावी गर्नु स्वभाविक छ । तर चाहानाले मात्रै हुँदैन । किनकी जनमत हामी कम्युनिष्ट अर्थात नेकपाको पक्षमा छ । गणितीय हिसाबमा र जनताको मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि हामीले यो निर्वाचन जित्ने काफी आधारहरु छन् ।
यसपटकको यो चुनावलाई नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ लडाईको रुपमा लिएको अवस्थामा यहाँहरुले आफ्नो तयारी चाँही कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले निर्वाचन केन्द्रित तयारी गरिरहेका छौं । युवाहरुलाई परिचालन देखि लिएर आम मतदाताहरुको मन जित्ने खालका कार्यक्रमहरु लगाएत जनतामा भेटघाट कार्यक्रमलाई तिब्रता दिएका छौं । जनतामा हाम्रा तत्कालिन, आवधिक र दृघकालिन योजनाका खाकाहरुलाई पु¥याएर आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्ने गरी अन्तिम तयारीको लागि केन्द्रित छौं ।
यहाँले चुनावमा जितको सुनिश्चिता भएको पटक पटक भनिसक्नु भएको छ जित्ने आधार चाँही केलाई ठान्नुहुन्छ खुलस्त पारिदिनुहोस न ।
मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेंकी जितको प्रमुख आधार भनेको जनमत हाम्रो पक्षमा छ । यो ध्रुवसत्य कुरा हो । त्यसको साथसाथै हिजो एक्लै चुनावमा भिड्दा पनि झिनो मत अर्थात नौ मतले मात्रै पराजित भएको हुँ । तर अहिले हामी ठुला दुई कम्युनिष्ट पार्टी नै छौं । यो अवस्थामा हाम्रो जित्ने सुनिश्चिता नै भयो नी अरु आधार नै चाँहिदैन ।
विगतको अनुभवले चुनावमा त धेरै खर्च होलानी खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
म विगतको निर्वाचनमा पनि भाग लिएको व्यक्ति हुँ । गत निर्वाचनमा पनि हामीले त्यति खर्च गरेनौं । किनकी आर्थिकमा मितव्यविता अपनाउनुपर्छ भनेर सामन्य खर्चले नै चुनावमा होमिएका थियो । जनताको जनमत हुने पार्टीलाई पैसा खर्च गर्न पर्दैन । अहिले पनि हामी सोही सिद्वान्त र आर्दशमा अडिग छौं । अघिल्लो चुनावलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेले अत्याधिक मात्रमा पैसा खर्च ग¥यो । तर पनि असाध्यै झिनो मतले मात्रै जित्यो । यसकारण यसपटक पनि हामी कांग्रेसको जस्तो चुनावी खर्च नबढाउने सोचमा छौं । समर्थक जनता र कार्यकर्ताको स्वच्छिक सहयोगले नै चुनावी सामन्य खर्च चलाउने सोचेका छौं ।
यहाँले यदि यो वडा जित्नुभयो भने केलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
मैले वडा जिते पछि सर्वप्रथम ग्रामिण सडकहरुलाई व्यवस्थित गर्ने छु । त्यसका अलवा माथि उल्लेख गरेझैं शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने सोचेको छु ।
९) अन्त्यमा यस मिडिया मार्फत यहाँको भनाई केही छ की ?
यहाँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत यहाँका आम जनतालाई के भन्न चाहान्छु भने मैले यस वडामा निर्वाचित भएर आए पश्चात जनताका आधारभुत आवश्यकताहरुलाई पुरा गर्न तथा रोजगारीको सिर्जना गर्न व्यवसायिक तथा आधुनिक कृषि प्रणालीको सुरुवात, अन्य आयआर्जन मार्फत आत्मनिर्भता लगाएत योजनाहरु सुरुवात गर्ने छु । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र रोजगार लगाएतमा मेरो ध्यान जाने छ त्यसकारण मलाई अत्याधिक मत दिएर जिताउन वडाबासीहरुमा हृदय देखिनै आग्रह गर्न चाहान्छु । धन्यवाद ।
प्रस्तुती ः दिनेश दुलाल